27 / 11 / 2020 27 / 11 / 2020 ခရစ် Wharfe 633 Views စာ0မှတ်ချက် 10696 အလယ်အလတ် Creative အုတ် Box ကို, 21321 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာကာသစခန်း, The Beatles ၃၁၁၉၈, 41395 Friendsတင်ပါးဘတ်စ်ကား, 41397 မိုဘိုင်းဖျော်ရည်ထရပ်ကား, 41432 Alpaca Mountain Jungle ကယ်ဆယ်ရေး, 42095 အဝေးထိန်းစတန့်ပြိုင်သူ, 60197 ခရီးသည်ရထား, 60253 ရေခဲမုန့်ထရပ်ကား, 60262 ခရီးသည်တင်လေယာဉ်, 71705 Destiny ရဲ့ကျေးဇူး, 75274 TIE တိုက်လေယာဉ်လေယာဉ်မှူးသံခမောက်လုံး။, 75288 ကို AT-AT, 75936 Jurassic ပန်းခြံ: T. rex သောင်းကျန်း, ၇၆၃၈၆ Hogwarts နာရီမျှော်စင်, 76165 သံက Man သံခမောက်လုံး, Black ကသောကြာနေ့, Black ကသောကြာနေ့ 2020, Friends, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego, Star Wars
Argos ကြီးမားတဲ့အမျိုးမျိုးကိုဖြတ်ပြီးသိသိသာသာငွေစုကမ်းလှမ်းနေသည် Lego ရောနှောခြင်း၌အချို့သောသွေးဆောင်အပေးအယူနှင့်အတူက Black သောကြာနေ့များအတွက် themes များ။
စာရင်း၏ထိပ်ဆုံးမှာ ၇၅၉၃၆ Jurassic Park T. rex Rampage ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုပေါင် ၁၆၄ ဖြင့်သာရနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပေါင် ၂၂၀ ဈေးနှုန်းဖြင့် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းချွေတာသည် သို့သော်သင်အပါအ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများအတွက်အထူးလျှော့စျေး ၅၀% အထိလျှော့စျေးကိုလည်းသင်တွေ့လိမ့်မည် Star Wars, Friends, ဟယ်ရီပေါ်တာ နှင့် Lego Art.
စာရင်းအပြည့်အစုံကိုကြည့်ပါ Argos အပေးအယူ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော:
၇၅၉၃၆ Jurassic Park T. rex Rampage သည်£ 75936 မှ£ 220 သို့ကျဆင်းသည်
60197 ခရီးသည်ရထား £ 105 ကနေ£ 70 အထိဖြစ်ပါတယ်
60262 ခရီးသည်တင်လေယာဉ် £ 90 ကနေ£ 60 အထိဖြစ်ပါတယ်
၇၆၃၈၆ Hogwarts နာရီမျှော်စင် £ 85 ကနေ£ 56.50 အထိဖြစ်ပါတယ်
42095 အဝေးထိန်းစတန့်ပြိုင်သူ £ 65 ကနေ£ 43 အထိဖြစ်ပါတယ်
10696 အလယ်အလတ် Creative အုတ် Box ကို£ 25 မှ£ 15.50 သို့ကျသည်
75274 TIE တိုက်လေယာဉ်လေယာဉ်မှူးသံခမောက်လုံး £ 55 ကနေ£ 36.66 အထိဖြစ်ပါတယ်
75288 ကို AT-AT £ 140 ကနေ£ 93 အထိဖြစ်ပါတယ်
21321 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာကာသစခန်း £ 65 ကနေ£ 52 အထိဖြစ်ပါတယ်
76165 သံက Man သံခမောက်လုံး £ 55 ကနေ£ 36 အထိဖြစ်ပါတယ်
71705 Destiny ရဲ့ကျေးဇူး £ 125 ကနေ£ 83 အထိဖြစ်ပါတယ်
The Beatles ၃၁၁၉၈ £ 115 ကနေ£ 76 အထိဖြစ်ပါတယ်
41432 Alpaca Mountain Jungle ကယ်ဆယ်ရေး £ 55 ကနေ£ 27.50 အထိဖြစ်ပါတယ်
41395 Friendsတင်ပါးဘတ်စ်ကား £ 65 ကနေ£ 43 အထိဖြစ်ပါတယ်
41397 Mobile Juice Truck သည်ပေါင် ၁၈ မှပေါင် ၁၂ သို့ကျသည်
LEGO.com နှင့်လည်း၎င်း၏အနက်ရောင်သောကြာနေ့အပေးအယူယနေ့စတင်ခဲ့သည် ရွေးချယ်ထားအစုံချွတ် 20%အခမဲ့ဖြစ်သည် 40410 ချားလ်စ်ဒစ်ကင်းအခွန်ဆက် £ 150 / $ 150 သုံးဖြုန်းနှင့်ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းနှင့်အတူ ၁၀၀,၀၀၀ VIP ရမှတ်များ. Lego Creator Expert ၁၀၂၇၆ Colosseum အခမဲ့နှင့်အတူယခုလည်းရရှိနိုင်ပါသည် ရောမရထား လက်ဆောင်နှင့်အတူ - ဝယ်ယူအစောပိုင်းမွေးစားများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
← Argos သည် LEGO 25 Jurassic Park T. rex Rampage - Black သောကြာနေ့အပေးအယူများမှ ၂၅% ခေါက်သည်
Wallace & Gromit သည် LEGO သို့ဆက်သွားသည် Ideas ပြန်လည်သုံးသပ် →